Umqhubi weHydraulic Static Pile Umqhubi | I-china hydraulic static pile driver manufacturers, abaxhasi
I-VY Series Hydraulic Static Pile Driver
Ividiyo ephambili yeTekhnoloji yeParameter yeModeli VY128A VY208A VY268A VY368A VY468A VY618A VY728A VY868A VY968A VY1068A VY1208A Max.piling pressure (tf) 128 208 268 368 468 618 728 868 968 108 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 Max 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8. 8.7 7.9 7.4 7.4 8.1 6.7 Min 1.9 1.3 0.9 1.1 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 Piling stroke (m) 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 Move stroke (m) Uluhlu olude 1.6 2.2 3 3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 I-Pac ethe tyaba ...
I-VY420A hydraulic statics yomfumba umqhubi
VY420A hydraulic statics pile driver sisixhobo esitsha esomeleleyo sokusingqongileyo kunye nenani lamalungelo esizwe. Inempawu zokungangcoliseki, akukho ngxolo, kunye nokuqhuba ngokukhawuleza kwemfumba, inqwaba yomgangatho ophezulu. I-VY420A i-hydraulic statics yomqhubi womqolo imele imeko yophuhliso lwexesha elizayo koomatshini bokufumba. I-VY series hydraulic static pile driver ineentlobo ezingaphezu kwe-10, amandla oxinzelelo ukusuka kwiitoni ezingama-60 ukuya kwiitoni ezili-1200. Sebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye namacandelo, ukwamkela uyilo olwahlukileyo lwe-hydraulic kunye neendlela zokulungisa ziqinisekisa ukucoceka nokuthembeka kakhulu kwenkqubo ye-hydraulic. Umgangatho ophezulu uqinisekisiwe ukusuka kwintloko. I-SINOVO inikezela ngeyona nkonzo ibalaseleyo kunye noyilo olwenzelwe wena noluvo "Konke kubathengi".
Umqhubi we-hydraulic static VY700A
I-VY700A i-hydraulic static pile driver sisiseko esitsha semfumba, kusetyenziswa uxinzelelo lwe-static enamandla yeoyile evelisiweyo, egudileyo kunye noxolo. Ukusebenza okulula, ukusebenza kakuhle, akukho ngxolo kunye nongcoliseko lwegesi, xa ucinezele isiseko semfumba, ulwakhiwo lokuphazamiseka komhlaba umda omncinci kunye nobungakanani bolawulo lokusebenza ngokulula, umgangatho wolwakhiwo kunye nezinye izinto. I-VY uthotho lwe-hydraulic static pile driver isetyenziswe ngokubanzi kwiindawo ezininzi, ngakumbi kulwakhiwo lweedolophu eziselunxwemeni kunye nokuguqulwa kwemfumba endala.
VY1200A static mfumba umqhubi
VY1200A static mfumba umqhubi luhlobo olutsha koomatshini zokwakha isiseko esebenzisa hydraulic ngokupheleleyo mfumba mfumba umqhubi. Iyakuthintela ukungcangcazela nengxolo ebangelwe yimpembelelo yesando kunye nongcoliseko lomoya olubangelwa yirhasi ekhutshwe ngexesha lokusebenza komatshini. Ulwakhiwo alunampembelelo zincinci kwizakhiwo ezikufutshane nakubomi babahlali.
Umgaqo wokusebenza: ubunzima bomqhubi wenqwaba busetyenziswa njengamandla okuphendula ukoyisa ukungavisisani kwicala lokuqina kunye namandla okuphendula kwincam xa ucofa ingqumba, ukuze ucinezele ingqumba emhlabeni.
Ngokwemfuno yentengiso, i-sinovo inokubonelela umqhubi we-pile eyi-600 ~ 12000kn kubathengi ukuba bayikhethe, enokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo zeemfumba zangaphambili, ezinje ngemfumba yesikwere, imfumba engqukuva, imfumba yentsimbi H, njl.